Bacitracin vs. Neosporin: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ပြင်းထန်သောအားကစား ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး နှိပ်ပါ ကျန်းမာရေး သတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ဖျော်ဖြေရေး ရပ်ရွာ
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Bacitracin vs. Neosporin: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Bacitracin vs. Neosporin: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
အသေးစားဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခြစ်ခြင်းသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၎င်းသည်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်သည်။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပေးရေးကိရိယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင့်တွင်လိမ်းပေးသောပantibိဇီဝဆေးဆီမွှေးရှိသည်။
Bacitracin နှင့် Neosporin တို့သည်အသေးအဖွဲအရေပြားဒဏ်ရာများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ခြစ်ခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည့်အရံဆေး (OTC) ပantibိဇီဝဆေးဆီမွှေးများဖြစ်သည်။ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုအမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (FDA) ကအတည်ပြုသည်။ Bacitracin ဆီမွှေးကိုယေဘူယျပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Neosporin အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘူယျပုံစံနှစ်မျိုးလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသုံးဆပantibိဇီဝဆေးရည်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ကိုသင်တွေ့ရပေမည်။ Neosporin ၌ bacitracin ပါ ၀ င်ပြီး polymyxin B sulfate နှင့် neomycin တို့ပါ ၀ င်ပါတယ်။
ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်အနာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုသော OTC ပantibိဇီဝဆေးများဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့တွင်ကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ရှိပြီးအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပါမည်။
bacitracin နှင့် Neosporin အကြားအဓိကကွာခြားချက်များကဘာလဲ။
Neosporin ကိုဖော်မြူလာအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Neosporin ၏အသုံးအများဆုံးပုံစံတွင်ပantibိဇီဝဆေးသုံးမျိုးပါ ၀ င်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသုံးကြိမ်ပantibိဇီဝဆေးဆီမွှေးဟုခေါ်သည်။ ၎င်းတွင် bacitracin, polymyxin B နှင့် neomycin ပါ ၀ င်ပြီးအမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အထွေထွေဆီမွှေးများသို့မဟုတ်လိမ်းဆေးများတွင်ရရှိနိုင်သည်။ Neosporin သည် Neosporin + Pain Relief Ointment နှင့် Neosporin + Pain ယားယံအမာရွတ်အဖြစ်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးတွင်ပtopိဇီဝဆေးသုံးမျိုးပါ ၀ င်သည်။ Neosporin + Pain Relief Cream နှင့် Neosporin Kids Plus Pain Cream တို့ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းနှစ်ခုလုံးတွင် pramoxine နှင့်အတူ bacitracin နှင့် polymyxin တို့ပါ ၀ င်သည်။ Neosporin Lip Health တွင် Vaseline တွင်တွေ့ရှိရသောအဖြူရောင်ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်ရေနံဂျယ်လီများပါ ၀ င်သည်။
bacitracin နှင့် Neosporin နှင့်ဆင်တူသည် Polysporin ဟုခေါ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ Polysporin သည် bacitracin နှင့် polymyxin B ပါဝင်သော 'နှစ်ဆပantibိဇီဝဆေးဝါး' ဆီမွှေးဖြစ်သည်၊ သို့သော် Neosporin တွင်သုံးဆပantibိဇီဝဆေးသုံးခရင်မ်တွင်ပါဝင်သော neomycin မရှိပါ။
RELATED - Bacitracin အသေးစိတ် Neosporin အသေးစိတ် | Polysporin အသေးစိတ်ကို
bacitracin နှင့် Neosporin အကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှု
မူးယစ်ဆေးအတန်း OTC လိမ်းပantibိဇီဝဆေး OTC လိမ်းပantibိဇီဝဆေး
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / ယေဘုယျအဆင့်အတန်း ယေဘူယျ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျ
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Bacitracin (သို့မဟုတ်ဘacitracin zinc) Triple ပantibိဇီဝဆေးဆီမွှေးသို့မဟုတ် bacitracin, polymyxin B sulfate နှင့် neomycin sulfate
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ ဆီမွှေး ဆီမွှေး၊
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? သန့်စင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်သုံးကြိမ်မှသုံးကြိမ်အထိဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့အနည်းငယ်အသုံးပြုပါ။ သင်ကမြုံပတ်တီးနှင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ သန့်စင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်သုံးကြိမ်မှသုံးကြိမ်အထိဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့အနည်းငယ်အသုံးပြုပါ။ သင်ကမြုံပတ်တီးနှင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ကာလတို ကာလတို
အဘယ်သူသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသည် ဆေးဝါး? ကလေးများနှင့်လူကြီးများ ကလေးများနှင့်လူကြီးများ
bacitracin နှင့် Neosporin ကုသသောအခြေအနေများ
bacitracin နှင့် Neosporin နှစ်ခုလုံးတွင်တူညီသောအရိပ်အယောင်ရှိသည် - အသေးစားဖြတ်တောက်ခြင်း၊
အခြေအနေ Bacitracin Neosporin
အသေးစားဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ခြစ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းများတွင်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ဘေစီထရာကင်း (သို့) Neosporin သည်ပိုမိုထိရောက်ပါသလား။
TO သို့ meta-analysis သည် အနာရောဂါကူးစက်မှု၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အလိမ်းပantibိဇီဝဆေး၏လိမ်းပantibိဇီဝဆေး (ထိုကဲ့သို့သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့) ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှုပ်ထွေးသောဒဏ်ရာများတွင်ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ သို့သော်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများနှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်လျော့နည်းသည်။ လေ့လာမှုပြုလုပ်သူများကပantibိဇီဝဆေးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်ပicalိဇီဝဆေးများသည်အရေးကြီးသောနေရာတွင်ရှိနေပြီးပိုးသတ်ဆေးကို bacitracin သို့မဟုတ် Neosporin ကဲ့သို့သောပtopိဇီဝဆေးများနှင့်အစားထိုးရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ လေ့လာမှုများသည် bacitracin ကို Neosporin နှင့်တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာတစ် 1996 JAMA လေ့လာမှု အဖြူရောင် petrolatum သည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးထိရောက်သောအနာစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်နံ့သာဆီဖြစ်သည်။ White petrolatum တွင်အနိမ့်ဆုံးကူးစက်မှုနှုန်းရှိပြီး bacitracin နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်အန္တရာယ်နည်းသည်။
အကောင်းဆုံးလိမ်းဆေးဆီမွှေးသည်သင့်အတွက်အနည်းဆုံးသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအထောက်အကူပစ္စည်းများအနေဖြင့်ပြွန်ကိုလက်ပေါ်တွင်ထားခြင်းကကောင်းသည်။
Neosporin နှင့် bacitracin တို့၏လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
Bacitracin နှင့် Neosporin များသည် OTC ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောကြောင့်များသောအားဖြင့်အာမခံသို့မဟုတ် Medicare အပိုင်း D တွင်မပါဝင်ပါ။ ရံဖန်ရံခါ၎င်းတို့သည်အချို့သောအစီအစဉ်များ (ယေဘူယျပုံစံဖြင့်) ဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်။
သင်သည် ၁ အောင်စပြွန်ကိုဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာနှင့်ဝယ်နိုင်သည်။ သင်ငွေကို SingleCare ကဒ်ဖြင့် bacitracin တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်၊ သို့သော်ဆေးညွှန်းပေးရန်သင့်ဆရာဝန်လိုအပ်သည်။ bacitracin သည် OTC ဖြစ်သော်လည်းလျှော့စျေးသက်သာသောကြောင့်သင်၏ဆေးဝါးဆရာဝန်သည်ဆေးညွှန်းကိုပြန်လည်ထုတ်ယူရလိမ့်မည်။
သင်သည် ၁ အောင်စပြွန်တံဆိပ်အမည် Neosporin ကိုဒေါ်လာ ၁၁ ဒေါ်လာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားထားပါကယေဘူယျ Neosporin ကို SingleCare ကူပွန်တစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၉ ဒေါ်လာအောက်သာ ၀ ယ်နိုင်သည်။
စံသောက်သုံးသော 1 ပြွန် 1 ပြွန်
ပုံမှန် Medicare အပိုင်း D ကို copay မရှိပါ မရှိပါ
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 3.60 + $ 8.65 +
Neosporin vs. bacitracin ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
အကယ်၍ သင်၌ဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာများပေါ်လာလျှင်အုံများ၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာနှင့်လည်ချောင်းရောင်ရမ်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်ပါကအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
Neosporin ရှိ Neomycin ၏ရှားပါးသော်လည်းအလွန်လေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာအကြားအာရုံဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လိမ်းဆေးနှင့်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ချေ။ အကယ်၍ ကြားနာခြင်းအပြောင်းအလဲကိုသင်သတိပြုမိပါကသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
သင်ကုသနေသည့်areaရိယာသည်အလွန်နီလာပြီးရောင်ရမ်းလာလျှင်သို့မဟုတ် oozing ဖြစ်နေလျှင်သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူကိုဆက်သွယ်ပါ။
Neosporin vs. bacitracin ၏မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က
ဒေသတွင်းတွင်အသုံးပြုသော Bacitracin နှင့် Neosporin တို့တွင်မည်သည့်ဆေးဝါးနှင့်မျှမထိတွေ့ပါ။
bacitracin နှင့် Neosporin ၏သတိပေးချက်များ
Bacitracin နှင့် Neosporin တို့သည်ပြင်ပအသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။
သင့်တွင်ပွင့်လင်းသောအနာ၊ နက်ရှိုင်းသောသို့မဟုတ်ထိုးဖောက်ဒဏ်ရာ၊ တိရိစ္ဆာန်ကိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ရှိမရှိကိုအသုံးမပြုမီသင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားမေးမြန်းပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ပါဝင်ပစ္စည်း (များ) နှင့်ဓါတ်မတည့်ပါက bacitracin သို့မဟုတ် Neosporin ကိုမသုံးပါနှင့်။
မျက်လုံး (များ) သို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကြီးမားသောနေရာများတွင်မသုံးပါနှင့်။
Neosporin vs. bacitracin နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Bacitracin သည်အလွန်သေးငယ်သောဒဏ်ရာများ၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းများ၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ခြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းတို့မှရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးအထောက်အပံ့အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Neosporin သည်အလွန်သေးငယ်သောခြစ်ခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းများမှကူးစက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသည့်ပantibိဇီဝဆေးဖြစ်သည်။
bacitracin နှင့် Neosporin အတူတူလား?
Bacitracin တွင် bacitracin ဟုခေါ်သောပiိဇီဝဆေးတစ်မျိုးတည်းသာပါရှိသည်။ Neosporin တွင်ပyိဇီဝဆေးသုံးမျိုး - bacitracin နှင့် polymyxin နှင့် neomycin တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဒီဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အများအားဖြင့်အသုံးပြုကြပါတယ်။ (အလားတူဆေးဝါးကို Polysporin ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းတွင်ပacိဇီဝဆေးနှစ်မျိုးပါ ၀ င်သည်။ bacitracin နှင့် polymyxin ။ ၎င်းကို double ပiိဇီဝဆေးဆီမွှေးဟုလူသိများသည်။ )
ဘေစီထရင့် (သို့) Neosporin ပိုကောင်းပါသလား။
လေ့လာမှုများကဤဆေးနှစ်မျိုးနှင့်တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိချေ။ အချို့လူများကတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ပိုနှစ်သက်သည်၊ အချို့ကမူတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလှန်ဖလှယ်ကြသည်။ ပanိဇီဝဆေးမွှေးကိုရွေးချယ်ရန်သင်လိုအပ်ပါကသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်စစ်ဆေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် bacitracin သို့မဟုတ် Neosporin ကိုသုံးလို့ရမလား။
ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်၎င်းတို့ကိုနေရာအနှံ့အသုံးပြုရန်လုံခြုံစေသည်။ bacitracin (သို့) Neosporin သည်သင့်အတွက်သင့်တော်မှုရှိမရှိသေချာစေရန်၊ မသုံးမီ OB-GYN ကိုမေးမြန်းပါ။
ငါအရက်နှင့်အတူ bacitracin သို့မဟုတ် Neosporin ကိုသုံးနိုင်သလား?
လိမ်းထားသော bacitracin (သို့) Neosporin ကိုအရက်ဖြင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။
လုံးဝမ ပantibိဇီဝဆေးသုံးမျိုး၏ဆီမွှေးသည် Neosporin နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီးအခြားပiotိဇီဝဆေးများ၊ ပိုလီမိုင်စင်နှင့်နီအိုမိုင်စင်တို့နှင့်အတူ bacitracin ပါ ၀ င်သည်။ Bacitracin တွင်သာ bacitracin ပါရှိသည်။
Neosporin သည်ဒဏ်ရာများအတွက်မကောင်းသော်လည်းအချို့လူများတွင်မတည့်သည့် neomycin ပါဝင်သောကြောင့်ဤဂုဏ်သတင်းကိုရခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်မည်သူမဆို Neosporin တွင်ပါဝင်သောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုဓာတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် bacitracin တွင်ပါ ၀ င်သည့် bacitracin အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လူအများစုကဆေးကိုကောင်းစွာသည်းခံကြပါသည်။
အကောင်းဆုံးပantibိဇီဝဆေးမွှေးသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အရေပြားယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ လူအများစုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအဆင်ပြေသော်လည်းအချို့လူများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတည့်ကြပါ။ ပanိဇီဝဆေးမွှေးကိုရွေးချယ်ရန်သင်လိုအပ်ပါကသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
Cymbalta vs. Lexapro: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
အိမ်မှာသဘာဝအတိုင်း uti ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်မလဲ
aleve နှင့် naproxen ခြားနားချက်ကဘာလဲ